Celcelis ahaan Dhallinyarada? | Martech Zone
Seed hadalada maanta maqaal ka soo LA Times. Waa maqaal aad u faahfaahsan oo ku saabsan 12 ilaa 24 sano jir.
Si xiiso leh ayaa ku filan, maqaalku wuxuu la hadlayaa carruurta ka baxsan Hollywood… laakiin wiilkeyga (17) wuxuu ku yaal halkan Indiana! Waxaad ogaan doontaa in kumanaan mayl ay helaan farqi yar oo u dhexeeya labada, in kastoo. Maalin kasta, waa tan waxa aad ka heli doonto wiilkayga oo samaynaya:
Duubista muusigiisa (Iska hubi BillKarr.com)
Qorista muusikada asxaabtiisa
Isku darka muusikada adoo adeegsanaya Studio Music Acid
Aadida bandhigyada (riwaayadaha yaryar)
Ka faallooda meelaha kale ee MySpaces
Isku dayga Taariikhda
Kooxda Dhalinyarada Kaniisadda
Akhrinta (Waxaan ka dhigayaa inuu wax akhriyo… laakiin wuxuu bilaabaa inuu ku soo wareego)
Bill ayaa la jooga saaxiibo dhowr ah haatan filimaanta. Aadida filimada waa dhif iyo naadir, in kastoo ... ay yareynayso miisaaniyadiisa muusig. Waxaad ogaan kartaa hal shay oo ka maqan liistadiisa… TV. Waa inaan ficil ahaan isaga ka baryaa inuu yimaado oo uu ila daawado show TV! Wiilkaygu waa mid caqli badan, qalbi wanaagsan, oo caafimaad qaba. Waagii hore, wuxuu ciyaaray kubbadda cagta, kubbadda koleyga, kubbadda koleyga, isboortiga, gawaarida gawaarida, iwm, iwm.
Aniga oo aan cadaadis iga helin, wiilkaygu wuu edeb badan yahay waana qof aad u bulsheed. Dhamaan asxaabtiisa aad ayey isugu egyihiin. Waxay leeyihiin dhadhan aad u gaar ah oo muusikada, dharka, timaha, kabaha, iwm etc dhammaantoodna aan ahayn kuwa guud. Xaqiiqdii, guud waa cadowga. Taas ayaa igu soo celinaysa faallooyinka Seth:
Haddii aad mashquul ku tahay suuqgeynta sida aad u heshay dareenkeyga, waxaad horeyba u sameysay qalad weyn.
Wiilkaygu waa inuu noqdaa qarowga suuqa. Dhab ahaantii 'dhadhankiisa' oo dhan wuxuu ka yimaadaa dhaqankiisa bulsheed, midkoodna kama soo baxo xayeysiinta guud. Taasi waa runtii wax laga fekero! Uma maleynayo in wiilkaygu caajisay. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay tahay wax iska soo horjeeda. Isagu wuxuu gabi ahaanba isku dayayaa inuu sameeyo wax soo saar daqiiqad kasta maalin kasta. Wuxuu ku nool yahay nolol buuxda mana doonayo inuu lumiyo daqiiqad saacad kasta ah.
Oo… si ka duwan aabayaasha badankood ee wiilasha dhallinta yar, igama waasho. Waxaad naga heli doontaa annaga oo qosol iyo qasan habeen kasta. Weligay kuma calaamadin doono isaga celcelis ahaan - waa nin dhalinyaro ah oo cajiib ah oo aan ku kalsoonahay inuu nolosha wax badan ku gaadhayo
PS: Weli waa inaan ku qayliyaa si aan isaga u soo saaro eeyga, laakiin waan la macaamili doonaa maalin kasta marka la barbardhigo wixii aabbahay ku khasbanaaday inuu qabto!
PPS: Waxaan hayaa gabadh 12 jir ah oo si isku mid ah u qurux badan, laakiin waxaan ka ilaaliyaa internetka.